Kudzoka kwemaporware Is Microsoft inodzoreredza hunyanzvi hwekare? | Linux Vakapindwa muropa
Kudzoka kwemaporware Is Microsoft inodzoreredza hunyanzvi hwekare?
Diego ChiGerman Gonzalez | | General
Mune ino blog tataura nezve Windows 11 kupfuura izvo zvinoenderana nebhulogi inotora izwi Linux muzita uye imhosva yangu yese. Ini ndinotenda kuti iwe unofanirwa kuona iyo indasitiri yemakomputa seyakazara uye kuti yemahara uye yakavhurwa sosi software inofanirwa kudzidza uye kunyange kushandira pamwe nevanokwikwidza nayo.
Nguva dzose uchichengeta mupfungwa kuti hausi hukama hwerudo. Ihwo hukama hwebhizinesi.
Mune mamwe mazwi, izvo Linux inogona kudzidza chimwe chinhu kubva kuMacOS uye Windows 11, kunyangwe zvimwe zvisiri izvo zvekusaita.
1 Kudzoka kwe vaporware
1.1 Ndiani atora maapplication angu eApple?
2 Chenjera kugadzirisa
Kudzoka kwe vaporware
Vanos nhoroondo iyo wikipedia iyo:
Vaporware ishoko rekunyepedzera rinoshandiswa kureva software kana Hardware yakaziviswa nemugadziri nguva refu budiriro isati yaitwa., asi izvo gare gare hazvibude, uye hazvina kana zvishoma kana zvishoma kudzikama kutenderera kutenderera. Izwi iri rinoreva kunyengera, kana kunyanyisa kuwedzeredza kwetariro; Izvi zvinoreva kuti mushambadzi anoziva kuti kugadzirwa kwechigadzirwa kwakakurumidza kutora mutoro wezuva rayo rekuburitsa, maficha ekupedzisira, kana kutendeka.
Ndiani atora maapplication angu eApple?
Musi waChikumi 24, Microsoft yakaunza chimwe chinhu chinonzi Windows Subsystem yeApple iyo inokutendera iwe kuti uise Android application paWindows 11 zvakananga kana kubva kuMicrosoft Store.e (Mukubatana neAmazon app chitoro uye nekupa kuti ivo vanogadzira vakweretese chibvumirano chavo) Kubva musi uyu haana kuzoonekwa zvakare. Microsoft haina kumbozvipa kuti zviongororwe mune yeruzhinji beta shanduro.
Kana avo vanoisa yekutanga yakagadzikana vhezheni yeWindows 11 muna Gumiguru 5. Kubva kuRedmond vakasimbisa kuti ichangoburitswa Yakavaka 22000.168 inouya nezvose zvinozowanikwa mune yekupedzisira vhezheni yaGumiguru, uye ipapo basa racho harisi kuwanikwa. TOSezvineiwo, nekuda kwekuita kwenyaya uye kuenderana kweApple, Microsoft yasarudza kurega maapplication eApple uye kuunganidzwa kweApplestore muchitoro izvozvi.
Zvinofungidzirwa kuti rutsigiro rwemaapplication eApple muWindows richaonekwa muna 2022. Hazvisati zvazivikanwa kana basa racho richizosvika seyakagadziridzwa kune vhezheni 21H2 yeWindows 11, kana isu tinofanirwa kumirira Microsoft kuti izviise mune inotevera. hombe yekuvandudza inonzi "vhezheni 22H2" kana "Nickel," inotarisirwa kubuda muhafu yepiri ya2022.
Asi, sekuvimbiswa nekambani, Windows 11 Android application rutsigiro ichapinda yeruzhinji beta kuyedza munguva pfupi. Inogona kurova iyo Windows Insider chirongwa gore rino.
Mumakore achangopfuura, Microsoft yakave nekugumburwa kwakawanda neyakagadziridzwa Windows 10, uye, kuzviri pachena kuti iwe unoda kuenderera netsika neWindows 11.
Vashandisi vakaisa zvinyorwa zvekutanga zveWindows 11 Vaka 22000.176 kana Vaka 22449 rkuzivisa kutambura nenhevedzano yezvinetso zvakakomba ikusanganisa kusateerera kwemenyu yekutanga, bharaki, Explorer.exe, zvigadziriso zveWindows, pakati pezvimwe zvikamu zvakakosha zveiyo sisitimu inoshanda inoita kunge yanyangarika kana kutyoka.
Mune zvimwe zviitiko, vashandisi vakataura kuti bharaki rebasa uye yekutanga menyu yanga isina chinhu zvachose, uye girazi reawa rinoratidzwa kana vashandisi vofambisa iyo inotora padhuze nebharaki rebasa.
Kumwe kunyunyuta kwakashumwa:
Mushure mekumisikidza, muchina unomhanya zvishoma uye bharaki rebasa rinonamira. Kudzokororwazve reboots kuchiri kushanda, hapana software inogona kubatwa, uye mamwe mapfupi makiyi haashande
Vamwe vanhu vakataura kuti yavo yemenyu menyu (kurudyi kudzvanya) yakanonoka mushure mekuvandudza uye kuti ivo vanowana inotevera meseji yekukanganisa pavanobaya pane "maitiro"
Iyi faira haina chishandiso chakabatana chekuita chiito ichi. Ndokumbirawo uise chishandiso kana, kana imwe yatove kuiswa, gadzira musangano pane default application marongero peji.
Kubva kuMicrosoft vakavimbisa izvozvo iyo bug yakakanganisa zvishandiso zvakadzora sevha-parutivi chigamba uye isina hapana chekuita neshanduro dzekutanga dzakaburitswa, kuti iwe ugone kuisa zvigadziriso usinganetseke nezve idzi nyaya.
Ngatitarisirei kuti gore rino Kugoverwa kweLinux kunosvika netsoka dzavo uye kukunda pamusoro pevashandisi vasina kugutsikana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kudzoka kwemaporware Is Microsoft inodzoreredza hunyanzvi hwekare?
mushandisi 15 akadaro
inoita 10 mwedzi
Nezve kugadzirisa, Windows Gadziriso inonyadzisa, inononoka zvakanyanya (kunyanya ichienzaniswa neLinux kana Android) uye inopa akawanda madudu. Uye nezve Windows 11, ini handioni kukwezva kudiki (uye chero zvodii, chero munhu anofarira aesthetics yeshanduro nyowani, ndine chokwadi chekuti application inoteedzera iyo Windows 11 goko ichabuda
Pindura mushandisi 15
cmus, rairo yekuraira mumhanzi mutambi kune avo vanofarira chimwe chinhu chakareruka kune chimwe chinhu chakanakisa
Linus inopokana Paragon uye inoshoropodza GitHub yekubatanidzwa